Caafimaadka: isweydaarsiga dopamine Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Caafimaadka Isu dheellitirnaan & isu dheelitir la’aan
Jidhku wuxuu raadinayaa dheelitir si uu u joogteeyo heerarka tamarta iyo inuu ilaaliyo dhammaan nidaamyadiisa. Nidaam kasta oo ka mid ah nidaamkan ayaa loo yaqaan Homeostasis. Tusaale ahaan dadka waaweyni waxay u baahan yihiin 6-8 saacadood oo hurdo ah habeenkiina qaangaadhka ayaa u baahan in ka badan. Waxay u baahan yihiin hurdo si ay uga caawiyaan maskaxda iyo jirku inay dib isu soo celiyaan, sameeyaan wixii dayactir ah, xoojiyaan xusuusta isla markaana bogsadaan. Jidhku wuxuu hayaa heerarka sonkorta dhiigga, cadaadiska dhiigga iyo biyaha heer joogto ah oo ku dhex jira meel cidhiidhi ah. Marka dhowr nidaam ay wada xiriiraan oo ay nidaamiyaan dhexdooda si ay isu dheellitiraan oo ay ula qabsadaan markay xaaladuhu is beddelaan, hawsha ayaa loo yaqaan allostasis. Waa nidaam aad u firfircoon oo isku dheelitiran, oo nidaamiya nidaamyo dhowr ah.
Maxaa ku dhacaya wax aad u badan, aad u yar ama kaliya heerarka saxda ah ee dopamin.
Waxaan ku raaxeysan karnaa 'abaalmarinta' cuntada ama jinsiga. Marka aan kufilanahay si aan u daboolno baahideena jireed, maskaxdeena waxay u dirtaa qalab isdabajoog ah oo noo sheegaya inaan joojino. Kadibna waxaan ka heli karnaa waxqabadyo kale oo lagama maarmaan u ah nolol maalmeedka. Haddii aan iska indhatirno calaamadaha oo aan sii wadno, waxaan jidhka ka saari karnaa dheelitirka. Tusaale ahaan, marka aynu ku hayno 'walwal' walax ama habdhaqan, habka satalaytiga ayaa si ku meel gaar ah loo hayn karaa. Gawaarida waa la gooyey. Si kale haddii loo dhigo, maskaxdeena waxay bilaabi karaan inay turjumaan sharraxaadda 'baahida badbaadada'. Waxay markaa noo ogolaaneysaa inaan sii wadno inaanu si ku meel gaar ah u isula tagno. Bal qiyaas dareen ka hor inta aadan isbeddel ku jirin xilliga jiilaalka marka ay liqi karto 20 salmon waqti aan xanuunsaneyn. Ama ka fiirso xilliga gu'ga xilliga gu'ga marka xayawaanku raadinayaan bacriminta inta badan ee suurtogalka ah.
Xilliga haraggu marna kama dhamaanayo
Pornography Internet wuxuu u eg yahay maskaxda sida xilli mateerka, laakiin xilli mood ah oo aan marnaba dhammayn. Xusuusnow maskaxdeenaga asaliga ah ee aan isbeddelay waqti yar. Maskaxda asaasiga ahi waxay u muuqataa in ay porno internetka u tahay 'nacnac quudin'. Waa fursad weyn oo bilaash ah oo bacriminaysa, taas oo nagu kaxeyneysa 'inaan helno inta uu helayo wax fiican'. Iyada oo si joogta ah loola jeeda, maskaxdu waxay u fasiraysaa mulkiilaha aan horey loo aqoonin ee loo baahan yahay badbaadada. Si deg deg ah u raadi in ay la qabsadaan adigoo bedelaya habka wax iibsiga ee maskaxda.
Shirkadaha internetka waxay isticmaalaan cilmi-baarista ugu fiican ee la heli karo si ay u sameeyaan caado-sameynta alaabooyinka naga ilaaliya. Arag tani TED hadal by Nir Eyal.
Diiradeenu waa qaabka ganacsiga internetka sida uu sheegayo Sir Tim Berners Lee, aabaha webka adduunka ee ballaaran. Qiimaha ay u leeyihiin xayeysiinta waa sida dahab. Ma jiro wax la mid ah ciyaar xor ah ama video on internet. Markasta oo aan ku dhejino 'sida' warbaahinta bulshada ama daawashada filim cusub, boqollaal shirkadood ayaa ururiya xogtaas oo ay naga dhisi karaan profile. Markaan sii kordhin karno internetka, waxay lacag badan ku siiyaan dadka xayeysiiya inay naga caawiyaan. Maandooriyeha micnaheedu waa inaan helno wax yar oo awood leh iyo awood awood maskaxeed oo la heli karo si ay u bartaan xirfadaha, lacagteena u dhisto ama dhisaan xirfad.
Saamaynta Maskaxda >>